Photography » အမဲလိုက်အက	17
Posted by warsojuly on Jul 16, 2016 in Photography | 17 comments
နာဂိုရာမှာ နွေဘက်ရောက်ပြီဆိုတော့ အကောင်ပလောင်လေးတွေထွက်ချိန်ပေါ့
Robber Fly & Prey(1)
အမဲလိုက်တော်တဲ့ မုဆိုးကြီး Robber Flyကြီးတွေရတတ်တယ်ဗျ..
Robber Fly & Prey(2)
Robber Fly & Bokeh
Behind the V(0r)Y Shape
အပင်ရိုင်းတွေ မြက်ပင်ရှည်တွေနားမှာရှိတတ်တယ်(ပုံသေတော့မဟုတ် ကျနော်တွေ့ဖူးသမျှ)
မျက်လုံးအမည်းနဲ့အကောင်လဲရှိတယ် ကျောမှာကုလားအုတ်လို ဘုပါတယ်အကောင်တွေလဲရှိတယ်
မြစပဲရိုး says: မျက်လုံးက ကျောက်တစ်လုံး ကို သွေးပြီး တပ်ထားသလို လှ လိုက်တာ။ :-))
warsojuly says: အပြင်မှာအဲဒီပုံထဲမှာမြင်ရတာထက်ပိုလှတယ်ခင်ဗျ
လုံမလေးမွန်မွန် says: လှလိုက်တာ . . . . တောထဲမှာလားဟင်
warsojuly says: အိမ်နားကပန်းခြံထဲမှာပါခင်ဗျာ
kai says: ဘာကင်မရာ..ဘာလန်းစ်နဲ့ ဘယ်လိုရိုက်ထားတယ်ဆိုတာလေးလဲ… သိချင်..။
warsojuly says: ဟုတ်ပါ့အဲဒါရေးဖို့မေ့သွားတယ်
Camera:Canon Kiss x7i(700D)
Lens:Canon EF L 100mm Macro IS USM
Flash: Camera Built-in Flash
Retouch:Adobe Lightroom & Nik Output Sharpener
kotun winlatt says: ပုံတွေက မိုက်သယ်ဗျ . . . တော်တော်လေး အပင်ပန်းခံ ချောင်းရိုက်ခဲ့ရမှာပဲ . . .
warsojuly says: မရိုက်ခင်အကောင်ရှာရတာကပိုခက်တယ်ဗျ..
အောင် မိုးသူ says: အဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ မျက်လုံးက မိုက်လိုက်တာ။
ဓာတ်ဆရာ စကားနားထောင်ပြီး ပို့(စ) ပေးတတ်တဲ့မော်ဒယ်ကို ရိုက်ထားသလိုပါပဲကွယ်။
warsojuly says: ငင်….စကားနားထောင်ဖို့နေနေသာသာ..
မမချွိ says: အဲလို အကောင်ကို ဒီလို ရအောင် ဓာတ်ဖမ်းနိုင်တာ တော်တယ်လို့ ပြောချင်တာ။
warsojuly says: အဟီး ကျေးဇူး
Was this answer helpful?LikeDislike 1143
may july says: ကာလာလေးတွေ လှထှာ ..
အကောင်လေးကိုတော့ အသဲယားးပါ ဘိ ..
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ရိုက်ချက်ကောင်းပါ့…
.ပုံကိုရှင်းရှင်းအနီးကပ်မြင်ရတော့လည်း ကြောက်စရာကြီးပဲ…မျက်လုံးကတော့ အံ့ဖွယ်လှပါပေ၏ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ပုံနဲ့အမည်ပေးသဘောကျမိ
Thint Aye Yeik says: ဘဝမှာ တစ်ခါလောက် (တစ်ပုံလောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်….)အဲ့လို ပုံမျိုး ရိုက်ခွင့်ရချင်လိုက်တာ..။
ကိုယ်ရိုက်ခဲ့သမျှ ပုံတွေ…တစ်ခါမှ..ဒီလောက် ကြည့်မကောင်းခဲ့ဖူးဘူး။